गैह्र कम्युनिष्ट दुई ठूला पार्टीको एकता सहि निर्णय » नेपाल प्लस
गैह्र कम्युनिष्ट दुई ठूला पार्टीको एकता सहि निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले पार्टी एकिकरणको सहि निर्णय गरेका छन् । किनभने कम्युनिष्ट नाम राखेर बनेका यि दुबै पार्टी वास्तविकरुपका कम्युनिष्ट पार्टीनै थिएनन् । कम्युनिष्ट नामका पूँजीवादी पार्टी थिए । संसदिय पद्दत्तीमा पुगेपछि एकै निति, रुप र कार्यशैली, उहि वर्गको हित गर्ने दुई वटा पार्टी अस्तित्वमा रहन संभवनै थिएन । त्यसैले कुनै एक पार्टी बिलय, हुने, समाप्त हुनैपर्ने थियो । त्यो अवस्था स्रिजना हुनु अगाडिनै पार्टी एकिकरण गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले सहि निर्णय गरेका छन् ।
नेकपा एमाले त समाजवादी पार्टीसम्म पनि थिएन । ऊ कम्युनिष्ट पार्टी होइन भन्ने कुरोमा एमालेमै भ्रम थिएन । बरु कम्युनिष्ट नाम राख्दा विश्वका पूँजिवादी शासकहरुले नपत्याउलान् भन्ने त्रासले पार्टी कार्यालयबाट मार्क्स र लेलिनका फोटासमेत झिकेर लुकाउने गरेकै थिए । पूँजीवादीहरुका अगाडी ‘हामी कम्युनिष्ट होइनौं’ भनेर स्पष्टिकरण दिएकै थिए । उनीहरुले आफू समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरित भएको बताउँदै आएका हुन् । तर यो पार्टी समाजवादी पार्टीपनि थिएन, होइन । यो पूँजीवादी पार्टी हो ।
एमालेमा कम्युनिष्ट सिद्दान्त, आचारण र नितिको त के कुरो गर्नु, समाजवादी पार्टी बन्न लायक निति, काम र सिद्दान्तपनि देखिन्न । त्यसैले एमाले पूँजीवादी पार्टी हो । यो पार्टीसित एकता गरेर नव पूँजीवादी नेकपा माओवादी केन्द्र कहाँ चुक्यो ? यो पार्टी कहिँ चुकेको छैन । बरु निति, आदर्श र सिद्दान्तको निकटता अनुसार सहि निर्णय गरेको हो । हँसिया र हथौडा अंकित झण्डा बोकेर कम्युनिष्ट नारा, गरिवका आवाज र सर्वहारा रटान भिर्दै हिँड्नुको रहर मात्रै हो माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने केहि कार्यकर्ता र नेताहरुको । सारमा पूँजीवादी पार्टीमा रुपान्तरित भैसकेको माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसित पार्टी एकिकरण गरेर सहि निर्णय गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कम्युनिष्ट पार्टी होइन भन्ने माओवादीकै तर्कलेपनि सिद्द गर्छ । नेकपा एमालेसित पार्टी एकता गर्न अघि सरेको यो पार्टीका नेता दुई पार्टीको एकिकरणपछि कम्युनिष्ट नाम राख्ने की समाजवादी पार्टी भन्दै बहसमा उत्रिए । उनीहरु स्पष्ठ छन्, माओवादी केन्द्र र एमाले दुबै कम्युनिष्ट पार्टी होइनन् । बरु नेपालमा कम्युनिष्ट नाम बिक्ने, गरिब दुखिको पक्षधर पार्टी भनेर चिनिएकाले जनतालाई भ्रम छर्न, तिनको मत लिन यो नाम राख्नुपर्छ भन्न दौ मात्रै रचिएको हो, नेताहरुद्वारा । यदि नेपालमा कम्युनिष्ट नाम बिकाउ र आकर्षण नहुँदो हो त यिनले आफ्नो पार्टीको नाममा कम्युनिष्ट शब्द झुण्ड्याउने थिएनन् ।
यदि माओवादी केन्द्र सच्चा कम्युनिष्ट हुन्थ्यो भने नेकपा एमालेसित पार्टी एकता गर्न पुगेको समाजवादी जनता दल र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ती कसरि एकै थलोमा अटाउँथे ? किनभने यि दुबै दलले आफ्नो पार्टी कम्युनिष्ट नरहेको स्पष्ठै पारेर पार्टी गठन गरेका हुन् । कम्युनिष्ट होइनौं भनेर अलग पार्टी गठन गर्दै हिँडेका दल फेरि कम्युनिष्ट पार्टीमा फर्किने कुनै संभावनानै थिएन ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबिच पार्टी एकता हुने देखेर केहि माओवादी कार्तकर्ता र नेताको रोदन सुनिनु अश्वाभाविक होइन । किनभने माओवादीका केहि नेता र कार्यकर्ता अझैपनि नौलो जनवादी राज्य सत्ताको सपना देख्छन् । माओवादी केन्द्रलाई दुखि, गरिव, विपन्न, मजदूर र सर्वहारा वर्गको पार्टीका रुपमा बुझ्छन् । तर त्यो तिनको रहर र सपना हो । माओवादी ति वर्गको पार्टी जनयुद्द छोडेर संसदिय ब्यवस्थामा पुगेदेखिनै थिएन । संसदिय पार्टीमा रुपान्तरित भैसकेको पार्टी कहिल्यैपनि सर्वहारा वर्गको पार्टी रहनै सक्दैन ।
उसले गरिखाने, निमुखा जनताको नारा संसदमा पुगेदेखिनै छोडिसकेको हो । उसका केहि नेता रातारात करोडपति बने । माओवादीका कार्यकर्ताको चासो र लगाव ठेक्कापट्टा, पद र पैसामा केन्द्रित भयो । गाउँको बिगतको संवन्ध काटिएर माओवादी शहरिय सुकिलामुकिलाहरुको बन्यो । जनवादी राज्य सत्ताको वकालत गर्न नछोड्ने पार्टीले आफ्ना सेना घुँडा टेकाएर केहि पदमा बिक्रि गर्‍यो । केहि थान मन्त्रि, केहि राजदूत र केहि पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले लाखौं जनताको भरोसा साट्यो । पद, पैसा, पहुँच, सुख, मस्ति र धनाढ्यहरुको स्वार्थ रक्षा गर्नु मुख्य ध्येय बन्यो । संसदिय धारमा गएर मन्त्रि बन्न उसले घिनलाग्दा सबै हतकण्डा अपनायो । संसदिय ब्यवस्था मान्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र कसरि कम्युनिष्ट रहन सक्छ ? के छ माओवादी केन्द्रसित त्यस्तो कुनै गुण, आदर्श र निति कि माओवादीलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न सुहाउँछ ?
कम्युनिष्ट आचरण, आदर्श र निति सबै स्खलित भैसकेको माओवादी केन्द्र अर्को यस्तै पूजीवादी दलसित एकता नगरे उसको अस्तित्वनै संकटमा पर्थ्यो । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेसित पार्टी एकिकरण नगरेर माओवादीको अस्तित्व कति वर्ष टिक्न सक्छ ? आफ्नै अस्तित्वको रक्षाकालागिपनि माओवादी केन्द्रले पार्टी एकिकरणको रक्षात्मक बाटो समातेको हो र त्यो जायज कदम हो ।